Horta ၏ Labyrinth | ခရီးသွားသတင်း
မာရီယာ | | ဘာစီလိုနာ, စပိန်မြို့ကြီးများ
ပုံရိပ် ခါနာန် Wikimedia Commons
ဘာစီလိုနာသည်၎င်း၏လှပသောမော်ဒန်ပုံစံအဆောက်အအုံများ၊ ၎င်း၏သက်တောင့်သက်သာရှိသောကမ်းခြေများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းမှုများကြောင့်သာမကလူနှင့် visitors ည့်သည်များအားသဘာဝနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိစေမည့်အပြင် မြို့။
Ciutadella ပန်းခြံ၊ Güellပန်းခြံ၊ Cervantes ပန်းခြံ၊ Joan Brossa ဥယျာဉ်များမှာသာဓကအချို့မျှသာဖြစ်သော်လည်း၊ ဘာစီလိုနာတွင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့သောရှေးအကျဆုံးဥယျာဉ်သည် Horta Labyrinth ဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်ဤစာမူကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။ ဆက်ဖတ်ပါ
1 Horta ၏ Labyrinth ၏သမိုင်း
2 Horta Labyrinth ဆိုတာဘာလဲ?
3 Horta ၏ Labyrinth အတွက်သဘာဝ
4.1 Horta Labyrinth ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
Horta ၏ Labyrinth ၏သမိုင်း
Collserola ၏တောင်စောင်းတွင်တည်ရှိသော Horta Labyrinth သည်မြင့်မြတ်သောမိသားစုပိုင်မြေပေါ်တွင် Joan Antoni Desvalls, Marquis of Llupià, El Poal နှင့်Alfarrásတို့၏ဆန္ဒဖြင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ Theseus ၏ဒဏ္thာရီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံသူဗိသုကာ Domenico Bagutti နှင့်ဥယျာဉ်မှူး Joseph Delvalet တို့၏အကူအညီဖြင့် neoclassical ဥယျာဉ်ကိုဖန်တီးလို။ အနုပညာနှင့်သဘာဝကိုနှစ်သက်သူဖြစ်သည်။: စင်တာကိုရောက်တဲ့သူတိုင်းကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆုတစ်ခုအဖြစ်ရရှိနိုင်တယ်။
၎င်းအတွက်ဂရိ - ရောမဒဏ္myာရီမှဇာတ်ကောင်များကိုကိုယ်စားပြုသောထင်းရူးပင်များ၊ ပန်းပုများနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများမှဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
၁၉ ရာစုအလယ်ပိုင်းတွင် VIII Marqués de Llupiáသည်Joaquín Desvalls y Sarriera သည် torrente d'en Pallósinရိယာရှိဥယျာဉ်ကိုရင်ပြင်နှင့်ရင်ခုန်စရာကောင်းသောဥယျာဉ်ကိုတီထွင်ခဲ့သောဗိသုကာElías Rogent သို့တာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ ပန်းပွင့်များ၊ ရေတံခွန်နှင့်သစ်ပင်ကြီးများ။ ထို့အပြင် neoclassical ဥယျာဉ်တော်၌သူအထက်ပိုင်းနှင့်အလယ်အလတ်တ ဦး တည်းအကြားရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစုကုန်ခါနီးတွင် Horta Labyrinth သည်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် Desvalls မိသားစုကမြို့တော်ကောင်စီသို့ပေးခဲ့သည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအများပြည်သူဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင်အများပြည်သူအားဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ၇၀ ပြည့်နှစ်များမှ visitors ည့်သည်များအလွန်အကျွံ ၀ င်ရောက်လာခြင်းကြောင့်အချို့သောအဆင်တန်ဆာဒြပ်စင်များနှင့်အပင်များကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။ နှင့် ၎င်းကိုတဖြည်းဖြည်းဖျက်ဆီးခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်လူ ၇၅၀ အားကန့်သတ်ချက်ရှိသောစွမ်းအားဖြင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
Horta Labyrinth ဆိုတာဘာလဲ?
Horta Labyrinth သည်heရိယာ ၉ ဟက်တာရှိသောထင်းရှုးပင်များ၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်၎င်း၏အမည်ကိုခံယူထားသည်။ ဒီဥယျာဉ်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်:
အဆိုပါ Neoclassical ဥယျာဉ်ဖြေ - ၎င်းကိုနေရာသုံးခုခွဲပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ၎င်းသည်အောက်ခြေအဆင့်၊ အထက်အဆင့်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသည်၎င်း၏ Belvedere နှင့်အတူဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ရေကန်များ၊ fရာမစမ်းရေတွင်းများ၊ တဲများ၊ ဒဏ္myာရီပုံများ၊ အတု grottoes များ၊
Romantic ဥယျာဉ်: ယခင်ဥယျာဉ်ကိုဆန့်ကျင်။ ဤဥယျာဉ်၏အဓိကဆောင်ပုဒ်မှာ ၁၉ ရာစု၏အနုပညာလှုပ်ရှားမှု၏ကြေကွဲဖွယ်ခံစားချက်အရသေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယက်၊ ထင်းရှူး၊ ငှက်ပျောနှင့်ထုံးများကဲ့သို့သောသစ်ပင်များကိုပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစီစဉ်ထားသည့်တောရိုင်းဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသေးသောဆင်စွယ်နှင့်အနီရောင်နှင့်ချစ်ခြင်းပန်းပွင့်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေပြီးထိုမှောင်မိုက်နေသောရုပ်တုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Desvalls ၏နန်းတော်: Horta ၏ Labyrinth ၏ဝင်ပေါက်ဘေးတွင်တည်ရှိသည်မှာဤအဆောက်အ ဦး သည် ၁၈ ရာစုအကုန်မှအဓိကခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ၈ ရာစုမှကာကွယ်ရေးမျှော်စင်ကဲ့သို့သောဒြပ်စင်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ နန်းတော်၏နောက်ကွယ်တွင်ဂန္ထဝင်ဒဏ္myာရီမြင်ကွင်းများဖြင့်အလှဆင်ထားသည့် Jardin de los Boxjes တည်ရှိပြီး boxwood bushes ၏ကုတင်များဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။
Horta Labyrinth ပန်းခြံသည်၎င်း၏ရှုခင်းနှင့်ရှုခင်းများကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်အလွန်ဓာတ်ပုံရိုက်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလှပဆုံးနေရာအချို့မှာ -
Belvedere Staircase - neoclassical ဥယျာဉ်ရဲ့အထက်ပိုင်းကနေ labyrinth ကိုသွားတာပါ။
အဆိုပါ labyrinth: အထက် balustrade မှမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းတစ်ခုအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သောနေရာများတစ်ခုဖြစ်သည်။ os ရော့ဘုရားအားဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်ရုပ်တုတစ်ခုသည်ဓာတ်ခွဲခန်း၏အလယ်တွင်တည်ရှိသည်။
Dánaeနှင့် Ariadna နတ်ကွန်းများ - ၀ ိကောရိယနောက်ခံအနေဖြင့်ဤအဆောက်အအုံများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းများဖြစ်သဖြင့် ၁၉ ရာစုအကုန်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့အားအာကာသပြပွဲအဖြစ်စင်မြင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
Jardín de los Bojes - အထူးသဖြင့်နန်းတော်နောက်ဘက်ရှိဗဟိုလမ်းဖြစ်သည်။
Carlos IV ၏ရေကန်နှင့်တဲ။ အီတလီ neoclassical စတိုင်။
Mosses ဥယျာဉ် - ဒီတွင်းမှာ minotaur ရဲ့ခေါင်းပုံသဏ္aာန်နဲ့စမ်းရေတွင်းရှိတဲ့ဥမင်တစ်ခုရှိတယ်။
ပန်းဥယျာဉ်၏ရေကန်: အဏ္ဏဝါ motifs နှင့် triton ခေါင်းနှင့်အတူပန်းအိုးနှစ်ခုနှင့်အလှဆင်။
Romantic Channel - အစမှာ ၃ မီတာနက်တယ်။
ပိရမစ်၏စမ်းရေတွင်း - သူ၏စမ်းရေတွင်းသည်ခြင်္သေ့ခေါင်း၏ထိပ်တွင်ရှိသည်။
တရုတ်တံခါး - Romantic ဥယျာဉ်ဘေးတွင်ရှိသည်။
Horta ၏ Labyrinth အတွက်သဘာဝ
မူလအစတွင်ဟော်တာ၏ Labyrinth ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုသရုပ်ဖော်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသဘာဝတရားကိုသဘာဝတရားအားဒက်ကလိအားဖြင့်တွေးတောဆင်ခြင်သူများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ဘာစီလိုနာရှိဤပန်းခြံ၌ဇီဝမျိုးကွဲများဤမျှလောက်များပြားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
သစ်ပင်၊ ထင်းရှူးပင်၊ သစ်ပင်၊ လီပင်၊ စင်းပင်၊ ဆိုက်ပရပ်စ်၊ ငှက်ပျော၊ ဂျပန်အကာရှသား၊ မြင်းခွံ၊ သစ်ပင်၊
သတ္တဝါများအတွက် Horta Labyrinth သည် Sierra de Collserola မျိုးရိုးဗီဇများ၊ ရှဥ့်အနီများ၊ မှဲ့များ၊ လင်းနို့များ၊ လင်းနို့များ၊ ဘားများ၊ ငှက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤဥယျာဉ်သည်အခြားမျိုးစိတ်များတွင်စာငှက်များ၊ မှိုင်းများ၊ ချိုးငှက်များ၊ tucas လိပ်ချိုးများ၊ အဖြူရောင်လှည်းများ၊ ဥရောပရော်ဘင်များ၊
Horta Labyrinth ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။
သင်မက်ထရိုဖြင့်သွားလျှင်သင်ထွက်ခွာရမည့်ဘူတာမှာ Mundet station (လိုင်း ၃) ဖြစ်သည်။
သင်ဘတ်စ်ကားဖြင့်သွားလိုပါကလိုင်း ၂၇၊ ၆၀၊ ၇၆၊ H27 နှင့် B60 တို့ကိုယူပါ။
Horta Labyrinth သည်ဆောင်းရာသီတွင်နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၆ နာရီအထိနှင့်နွေရာသီတွင်နံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၈ နာရီအထိဖွင့်လှစ်သည်။
အထွေထွေလက်မှတ်မှာယူရို ၂.၂၃ ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းလျှော့ချမှုသည် ၁.၄၂ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်တနင်္ဂနွေများသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » Horta Labyrinth